नेपालमा को’रोनाबाट तेस्रो व्यक्तिको मृ’त्यु भएको समाचार भाइरल, अस्पतालले निकाल्यो सबैलाई चकित पार्ने यस्तो विज्ञप्ति ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/नेपालमा को’रोनाबाट तेस्रो व्यक्तिको मृ’त्यु भएको समाचार भाइरल, अस्पतालले निकाल्यो सबैलाई चकित पार्ने यस्तो विज्ञप्ति !
काठमाडाैं । नेपालमा को’रोना सं’क्रमणबाट तेस्रो व्यक्तिको मृ’त्यु भएको समाचार भाइरल बनेको छ । तर उपचाररत मान्छेलाई मृ’त्यु भएको भन्दै भ्रा’मक समाचार बाहिरिएपछि अस्पतालले त्यसको खण्डन गरेको छ । को’रोना सं’क्रमणको पुष्टि भएका गुल्मीको मदाने गाउँपालिका वडा नम्वर–६ का ४१ वर्षीय शिक्षक यति बेला बुटवलको क्रिमसन अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । तर सामाजिक सञ्जाल र केहि सञ्चारमाध्यामले समेत ती सं’क्रमित शिक्षकको मृ’त्यु भएको भन्दै भ्र’म छरेपछि बुटवलको क्रिमसन अस्पतालले विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त समाचारको खण्डन गरेको हाे ।
अस्पताल प्रशासनद्वारा जारी विज्ञप्तिमामा भनिएको छ, ‘जेठ १ गते यस अस्पतालमा गुल्मी जिल्ला मदाने गाउँपालिका वडा नम्वर–६ निवासी वर्ष ४१ का पुरुष एक हप्तादेखि ज्व’रो तथा टाउको दुखाइको स’मस्या लिएर आउनुभएको थियो । त्यस क्रममा बैशाख २ गते पीसीआर परीक्षणका लागि नमुना प्रादेशिक प्रयोगशालामा पठाईएको र त्यसको रिर्पोट जेठ ५ गते केभिड –१९ पोजिटिभ आएको र तत्पश्चात विभिन्न संचारमाध्याममा समाचार प्रशासरण हुनु स्वभाविक नै हो ।’
सं’क्रमित शिक्षकको सोही अस्पतालको आईसियु कक्षको भ्यान्टिलेटरमा राखेर उपचार गराइरहेको सो अस्पतालले जनाएको छ । विज्ञप्तिमामा भनिएको छ -‘केहि सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरुमा निज वि’रामीको मृ’त्यु भयो भन्ने ग’लत, भ्रा’मक, अतिरञ्जित समाचार सम्प्रेषण भई सम्पूर्ण जनसमुदायमा अनावश्यक त्रा’सको बातवरण सिर्जना भएकोले यस सम्वन्धमा गल’त समाचारको पछाडी नलाग्न सबैमा अपिल गरिन्छ ।’
यता गुल्मीका को’रोना सं’क्रमित ४१ वर्षे पुरुषको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । उनको रुपन्देहीको मणिग्राममा रहेको क्रिमशन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । अस्पतालका अध्यक्ष चिन्तामणी पाण्डेले बि’रामीको अहिले पनि आईसीयू कक्षमा भेन्टिलेटरको सहयोगमा उपचार भइरहेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘समाचारमा बि’रामीको मृ’त्यु भएको कुरा आएको छ । तर यो सत्य होइन । उनको अहिले पनि अस्पतालमा उचपार भइरहेको छ । अवस्था ग’म्भीर छ ।’ बि’रामीको अवस्था अघिल्लो दिनको जस्तै रहेको भन्दै अध्यक्ष पाण्डेले हल्लाका पछि नलाग्न आग्रह गरे ।
आज कन्चनको १३ औ दिनमा देखिएको दु:ख लाग्दो दृश्य; कन्चनको आत्माले शान्ती पाओस्
आचार्य बालकृष्ण ठूलो षड्यन्त्रबाट बाँचे